Umaka: ukwenziwa kwewebhusayithi | Martech Zone
Umaka: ukwenziwa kwewebhusayithi
I-Diib ukuhlaziya okungabizi kakhulu kwewebhusayithi, ukubika, kanye nokwenza okuhle okunikeza abathengisi be-DIY lonke ulwazi abaludingayo ukukhulisa ibhizinisi labo.
NgoLwesithathu, ngoMashi 20, 2013 NgoLwesibili, ngo-Mashi 19, i-2013 Douglas Karr
Ubuchwepheshe buyaqhubeka nokunikela ngamathuba amahle kakhulu kumabhizinisi amancane. Njengoba amandla wekhompyutha namapulatifomu eqhubeka nokuthuthuka, izindleko ziyaqhubeka ukwehla kulo lonke ibhodi. Eminyakeni embalwa eyedlule, amathuluzi okusesha namapulatifomu ezenhlalo ayizinkulungwane zamaRandi ngenyanga futhi atholakala kuphela ezinkampanini ezazikwazi ukukhokhela imali. Kusasa ngizobe ngikhuluma neqembu lochwepheshe bamabhizinisi amancane ngamathuluzi okubasiza futhi i-UpCity ingelinye lamathuluzi e
ILemonhead ithuthukise le infographic enkulu ukwenza lula inqubo yokuhlela, ukuklama nokwenza iwebhusayithi yakho isebenze. I-infographic ikuthatha esigabeni ngasinye futhi ifaka ukusetshenziswa, isigaba sabaphathi, ukuhlolwa, ukukhethwa kwegama elingukhiye nezinye izinto ezibalulekile ongazifaka. Ukuhlela, ukuklama nokwandisa iwebhusayithi eyenziwe lula ngezinhlelo ze-inthanethi. I-infographic design eyenziwe lula ye-webhusayithi iyinqubo yokwakhiwa kwewebhusayithi ngendlela eyenziwe lula kusetshenziswa ukuhlela okusebenzayo, ukwakheka kokuhlelwa kanye nokuqaliswa kwamasu. Ucezu olulodwa
Nayi enye i-imeyili engithanda ukuyithola, kepha imvamisa ungenzi lutho ngayo! Le yiDowntown Indianapolis, i-imeyili Entsha Ngokumangazayo. Ngihlala ngibhalisile ngoba ngithemba ukuthi kuzovela idizayini entsha - imininingwane yokwazisa idolobha lase-Indianapolis ikhona konke, kepha idizayini yenza i-imeyili ingafundeki futhi ingafundeki. Nakhu ukuthi kungani: Asikho isixhumanisi esiyinhloko kulwazi lwekhanda kuwebhusayithi yangempela ye-Indy Downtown Inc. Mhlawumbe lokho kungamela,